काठमाडौं/काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौंको अवस्थाबाट पोखराले पाठ सिक्नु पर्ने बताएका छन्। काठमाडौं र पोखराको चुनौती अनियन्त्रित बसाइँसराइ रहेको भन्दै शाक्यले व्यवस्थित बसोबासका योजना बनाउन पोखरा महानगरलाई सुझाव दिए। मेयर शाक्यको टोली सोमबार पोखरा महानगरको कार्यालयमा आएका थिए। उनीहरूलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाक्यले भने, […]
काठमाडौं, के तपाईंलाई हेर्दै चिटिक्क घर चाहनुहुन्छ? यस्तो घर एकाध महिनामै तयार होस् भन्ने इच्छा छ? तपाईंका यी दुवै रहर पूरा गरिदिनसक्छ ‘एसवाइ प्यानल’ ले। एसवाइ प्यानलले विगत तीन वर्षदेखि विभिन्न डिजाइनका आधुनिक घर बनाउँदै आएको छ। तर हामीले देख्दै आएका सिमेन्ट, इँट्टाको होइन, ‘प्रि-फ्याब’ घर। यो कस्तो […]
काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अस्पताल भर्ना भएका छन् । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेनसमा रहेका लामिछाने श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि हृयाम्स अस्पताल भर्ना भएका हुन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार उनको अवस्था अहिले सामान्य छ । उनलाई शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल मंसिर १५ गते सोमबार इश्वी सन २०२० नोभेम्वर ३० तारीख कार्तिक शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथी रोहिणी नक्षत्र शिव योग बालव करण चन्द्रमां बृष राशिमा आनन्दादि योगमा प्रवद्र्ध योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु कार्तिकस्नान तथा चतुर्मास व्रत समाप्ति, मन्वादि, थानकोटको वाणस्थलीमा त्रिवेणी […]
अमेरिकामा दशौं लाख नागरिकहरुले यो वर्ष २०२० को अन्त्यसम्म घरबाट निष्काशित हुनुपर्ने अवस्था आउने अनुमान गरिएको छ । करिब ५८ लाख वयस्कहरुले आफूहरु आगामी २ महिनाभित्र घरबाट निकालिने वा फोर्सक्लोजरको स्थितिमा पुग्ने सम्भावना अत्याधिक रहेको बताएका छन् । अमेरिकी जनगणना ब्यूरोले गरेको एक सर्वेक्षणमा यस्तो नतिजा आएको ब्लुमबर्गको […]
नवीन प्यासी/‘एक दिन मात्र ढिला आएको भए तिम्रो बुबालाई नगरपालिकाले गाडिदिन्थ्यो । र, तिमी जिन्दगीभर बुबाको लास खोजिरहन्थ्यौ,’ आजभन्दा १६ वर्षअघि विनयजंग बस्नेतलाई टिचिङ अस्पतालका कर्मचारीले भनेका वाक्य हुन् यी । त्यतिवेला विनयका बुबाले सडकबाटै बेवारिसे अवस्थामा दुनियाँ त्यागेका थिए । बस्नेतले बुबाको शवको ठेगाना खोज्दै दुई दिन सहर चहारे । सहरका […]
काठमाडौं । चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल वेई फेङ्गेलाई स्वागत गर्न पुगेका ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाललाई प्रहरीले पक्रेको छ । नेपाललाई प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट ‘ग्रेटर नेपाल’को ब्यानर सहित पक्राउ गरेको हो । उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा राखिएको छ । चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणलाई लक्षित गरेर काठमाडौको सुरक्षा व्यवस्था कडा […]
एजेन्सी । भारती र हर्षसम्म ड्र ‘ग्स पुर्याउने कारोबारीलाई एनसीबीले बुधबार पक्राउ गरेको छ । मुम्बईका बान्द्रा कोर्ट जक्सनले बुधबार राती सुनिल गवाई नामका कारोबारीलाई पक्राउ गरेको हो । उनीसँग १.२५० किलो पनि ब’रा’म’द भएको छ । सोधपुछको क्रममा सुनिल आफैंले डेलिभरी ब्वई बनेर ओसार पसार गर्ने गरेको […]
एजेन्सी/बुवाआमाले धुमधामसंग छोरीको विवाह गरिदिए । बेहुली बनेर बेहुलासंग सात फेरा लिइन् । तर विवाहको रात नै उनी आफ्ना प्रेमीका साथ लागेर हिडिन् । यो घटना भारतको उत्तर प्रदेशको गोंडामा भएको हो । राती आफ्नो घर भित्र्उाएको वुहारीको स्वागतका लागि वेहुलाको घरमा तयारी गरिएको थियो । यो घटना […]
विराटनगर । आफ्नै भाइले पालेको गाईको बाच्छी मा रेको आ रोपमा मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका–२ सुघा टोलका ३० वर्षीय भूपेन्द्र राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गजेन्द्र राईले पालेको गाईको डेढ वर्षको बाच्छी मा रेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीको टोलीले गजेन्द्रका दाजु भूपेन्द्रलाई शुक्रबार साँझ पक्राउ गरेको मोरङ […]
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल मंसिर १४ गते आईतबार इश्वी सन २०२० नोभेम्वर २९ तारीख कार्तिक शुक्लपक्ष चतूर्दशी तिथी कृत्तिका नक्षत्र परिध योग भद्रा करण चन्द्रमां मेष राशिमा १०ः४८ बजे सम्म पश्चात बृष राशिमा आनन्दादि योगमा धुम्र योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु शिव बैकुण्ठ चतुर्दशीव्रत […]
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल मंसिर १३ गते शनिबार इश्वी सन २०२० नोभेम्वर २८ तारीख कार्तिक शुक्लपक्ष त्रयोादशी तिथीे प्रातः १०ः३२ बजे सम्म पश्चात चतूर्दशी तिथी भरुणी नक्षत्र वरियान योग गर करण चन्द्रमां मेष राशिमा आनन्दादि योगमा ध्वांक्ष योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु विष्णुबैकुण्ठ चतुर्दशीव्रत […]
८० वर्षका पिता र ७० वर्षकी आमा । उनीहरुले जीवनभरको कमाइ बचत गरेर बैंकमा राखेका थिए । बुढा मातापिताको बैंकमा १ लाख ३० हजार पाउण्ड (२ करोड रुपैयाँ) थियो । वृद्ध दम्पती २०१७ मा युरोप घुम्न गए । यही बेला उनकी छोरीले उनीहरुको सबै पैसा क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट […]
जागिर पाउनका लागि मानिसहरुले आम रुपमा अन्तरवार्तामा केही न केही झुट बोल्छन् । तर, एक व्यक्ति ५ मिनेटमै त्यो जागिरको दौडबाट बाहिरिए जुन जागिरको लागि उनी अन्तरवार्तामा गएका थिए । खासमा ती व्यक्तिले आफू अन्तरवार्तामा जान बाँकी नै छ भन्ने सोचेका थिए तर उनको अन्तरवार्ता रिसेप्सनमै सकिएको थियो […]
श्रीमतीको अवैध सम्बन्धका कारण तनाब बढ्दै जाँदा डि प्रेसनको शि कार भएका एक व्यक्ति उपचारको लागि जुन डाक्टरकहाँ गए त्यही डाक्टरसँग नै श्रीमतीको अ वैध सम्बन्ध भएको खुलेको छ । अमेरिकाको ओरेगनका ती व्यक्तिले अहिले ती डाक्टरसँग २.९ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति माग्दै अदालतमा मुद्दा हालिदिएका छन् । द […]